နိုင်ငံတကာ, 16 ဇူလိုင် 2015
သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush
သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ဆေးရုံတင်ရ
အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း George H.W. Bush ဟာ ချော်လဲပြီး လည်ပင်းက အရိုးကျိုးသွားတဲ့ အတွက် ဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူနေရပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မူဝါဒတွေကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ သမိုင်းဝင် ခြေလှမ်းတရပ်အဖြစ် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေ အပေါ် ကန့်သတ်မှုတွေကို လျှော့ချပေးမယ့် ဥပဒေတရပ်ကို အောက်လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဂရိကြွေးမြီပြဿနာ ကယ်တင်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ဖို့ ကြွေးရှင်နိုင်ငံတွေက အပြန်အလှန်အားဖြင့် တောင်းဆိုတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးအစီစဉ်တွေကိုလက်ခံဖို့ ဂရိပါလီမန်က အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ အီရန်ရဲ့ နျူကလီယားအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံတကာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု အားလုံးကို ရုပ်သိမ်းဖို့ရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းအဆိုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။